एप्पल टिभी N | निन्टेन्डो र सेगा खेलहरू कसरी स्थापना गर्ने आईफोन समाचार
इमुलेटरहरू समाधान हुन् उनीहरूले फेला पारे जो आफ्नो कम्प्युटर वा स्मार्टफोनमा सधैंको क्लासिक खेलहरूको मजा लिन चाहन्छन्। तर अब अनुभव एप्पल टिभी लाई धेरै राम्रो धन्यवाद हुन सक्छ। नयाँ एप्पल मल्टिमेडिया उपकरणसँग यसको एप स्टोरबाट अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्ने सम्भावना छ, तर "अनौपचारिक" तरीकाले पनि, जुन प्रोभेन्स, एक निन्टेन्डो र SEGA इमुलेटर स्थापना गर्न तपाईंलाई अनुमति दिन्छ। यदि तपाईं आफ्नो एप्पल टिभी Super मा सुपर मारियो ब्रोसको मजा लिन चाहनुहुन्छ भने, यहाँ प्राप्त गर्नका लागि तपाईंले लिनुपर्दछ सबै चरणहरू छन्, र भिडियोलाई अझ स्पष्ट बनाउनको लागि पनि व्याख्या गरिएको छ।
एप्पल विकासकर्ता खाता (नि: शुल्कले कार्य गर्दछ) जुन तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ.
OS X El Capitan र Xcode को साथ कम्प्यूटर स्थापना भयो
4th औं पुस्ता एप्पल टिभी
USB-A बाट USB-C केबल
पहिलो चरण प्रोभेन्स अनुप्रयोग प्राप्त गर्नु हो। तपाई यसलाई GitHub मा फेला पार्न सक्नुहुन्छ, क्लिक गरेर यो लिङ्क. तपाईंले अनुप्रयोगको लिंक प्रतिलिपि गर्नुपर्दछ, जहाँ यो दर्साइएको छ क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्न छविमा।
तपाईंको एप्पल टिभी तपाईंको कम्प्युटरमा USB केबल मार्फत जडान गर्नुहोस् र खोल्नुहोस्। त्यो पछि Xcode खुला। यदि तपाईंसँग अझैसम्म तपाईंको विकासकर्ता खाता थपिएको छैन भने, "प्राथमिकताहरू> खाताहरू" मा जानुहोस् र आफ्नो विकासकर्ता खाता थप्नुहोस् ताकि एप्लिकेसन निर्माण प्रक्रियाको क्रममा कुनै समस्याहरू छैनन्। भयो कि शीर्षमा मेनू "स्रोत नियन्त्रण> चेक आउट" खोल्नुहोस् र विन्डोमा खुल्छ जुन तपाईंले GitHub मा पहिले प्रतिलिपि गरेको ठेगाना टाँस्नुहोस्। अर्को क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछि फेरि डाउनलोड क्लिक गर्नुहोस् अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नका लागि। यदि यो तपाईं असफल भयो भने (यसले मलाई धेरै चोटि असफल गर्यो) फिर्ता जानुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस्, वा "प्रकार" फिल्डलाई "Git" बाट "Subversion" मा बदल्नुहोस्, जसले मलाई यो सहि रूपमा काम गर्न मद्दत गर्‍यो। त्यसपछि देखा पर्ने पहिलो विकल्प छनौट गर्नुहोस् (मुख्य वा ट्रंक, यो तपाईंले पहिले छनौट गर्नुभएको विकल्पमा निर्भर गर्दछ)। «Next on मा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि स्थान डाउनलोड गर्नुहोस् जहाँ अनुप्रयोग डाउनलोड हुनेछ।
जब डाउनलोड समाप्त हुन्छ नयाँ Xcode विन्डो खुल्छ। माथिको बाँयामा "प्रोभेन्स" मा क्लिक गर्नुहोस् र "प्रोभेन्सन्स टिभी-रिलीज> एप्पल टिभी" चयन गर्नुहोस् ताकि अनुप्रयोग सिर्जना हुन सुरू हुन्छ। यो प्रक्रिया धेरै लामो छ (आधा घण्टा भन्दा बढी ले मलाई लिएको छ) त्यसैले धैर्यताको साथ यसलाई लिनुहोस्। एक पटक समाप्त भएपछि, माथि बायाँ (कालो त्रिकोण) मा "प्ले" मा क्लिक गर्नुहोस्, जसले एप्पल टिभीमा स्थापना सुरु गर्दछ। एक पटक स्थापना पूरा भएपछि, "एप्पल टिभीमा चलिरहेको प्रोभेन्स" लेबल शीर्ष पट्टीमा देखा पर्नेछ, जसको मतलब प्रक्रिया पूरा भयो। अब हामी हाम्रो कम्प्युटरबाट एप्पल टिभी काट्न र हाम्रो टेलिभिजन खोल्न सक्छौं।
तपाईंको एप्पल टिभीमा प्रोभेन्स अनुप्रयोग खोज्नुहोस् र यसलाई खोल्नुहोस्। "आयात रोम" चयन गर्नुहोस् र स्क्रिनमा देखा पर्ने ठेगाना लेख्नुहोस्। यो ठेगाना हो जुन तपाईंले तपाईंको कम्प्युटरको वेब ब्राउजरमा टाइप गर्नुपर्नेछ तपाईंको एप्पल टिभीमा रोम थप्न। कुनै पनि पृष्ठबाट रोमहरू डाउनलोड गर्नुहोस् (साधारण गुगल खोजीले दर्जनौं परिणाम दिनेछ) र जीप फाईलहरू ती हुन् जुन तपाईं त्यो ठेगानामा अपलोड गर्नुपर्नेछ।
विशेष रूपमा तपाईले रोम फोल्डरमा त्यो गर्नुपर्दछ जुन सूचीको अन्त्यमा हो। यसलाई खोल्नुहोस् र निलो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् Files फाइलहरू अपलोड गर्नुहोस् », तपाईंले डाउनलोड गर्नुभएको ZIP फाइलहरू चयन गर्नुहोस् र ती तपाईंको एप्पल टिभीमा हुनेछन् खेल्न तयार। हामी तपाईंलाई यो भिडियोमा सम्पूर्ण प्रक्रिया देखाउँदछौं जुन तपाईं एप्पल टिभीमा मारियो पनि कार्यमा देख्न सक्नुहुनेछ।
इमुलेटर एकदम राम्रोसँग बनेको छ र वास्तवमै राम्रोसँग काम गर्दछ। के धेरै अनुकूलित छैन सिरि रिमोट यस प्रकारको खेल हो, त्यसोभए सब भन्दा राम्रो कुरा तपाईले एक MFi नियन्त्रण रिमोटको प्रयोग गर्नु हो जसले पक्कै पनि यी क्लासिक्ससँग खेल्ने अनुभवलाई सुधार गर्दछ। उनीहरुको आनन्द लिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » Apple TV » एप्पल टिभी N मा निन्टेन्डो र सेगा खेलहरू कसरी स्थापना गर्ने
एल्किन गोमेज भन्यो
एप्पल विकासकर्ता खाता (नि: शुल्कहरू उपयोगी छन्) जुन तपाईं यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ… .. लिंकले काम गर्दैन ..
एल्किन गोमेजलाई जवाफ दिनुहोस्
सच्याइयो, माफ गर्नुहोस्
यति धेरै सेटि enterहरू प्रविष्ट गर्न पठाउनको लागि यिनीहरूको धेरै प्रक्रिया जब उनीहरू रेपो डाउनलोड गर्न वा क्लोन गर्न सक्दछन्, यसलाई Xcode मा खोल्नुहोस् र यसलाई चालु गर्नुहोस्।
जब म प्ले हिट गर्दछु र केही बेर पछि मलाई त्रुटि आउँछ र जब मैले फिक्स मुद्दामा हिट गर्छु म निम्न सन्देश पाउँछु।
आईडेन्टिफायर 'com.jamsoftonline.ProvenanceTV' को साथ एक अनुप्रयोग आईडी उपलब्ध छैन। कृपया फरक स्ट्रि string प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यो तपाइँ कसैलाई भएको छ? के तपाईँ मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
Mmunozg लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईको एप्पल खाता प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईले पहिले विकासकर्ताको रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
नमस्ते ममन्जुong जस्तो समान समस्या छ र मसँग मेरो एप्पल खाता सेट अप छ। यसको लागि € paying। को भुक्तान नगरी। त्यहाँ के गर्ने? वैध हुन आईडीको लागि भुक्तान गर्नुहोस्? अभिवादन।
Xevicreida लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई त्यस्तै लाग्छ
Isac लाई जवाफ दिनुहोस्
Kepa लाई जवाफ दिनुहोस्
यसले मलाई उही त्रुटि दिन्छ जस्तो कि माथिकोमा कुनै समाधान छ? धन्यबाद
Icugiani लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई उही समाधान चाहिन्छ !!! 🙁 मैले यसलाई स्थापना गर्नु पर्छ 🙁 धन्यवाद
राउल तापिया भन्यो
जब म पृष्ठ खोल्नको लागि मेरो पीसीमा ठेगाना राख्छु र रोमहरू अपलोड गर्दछ जुन पृष्ठ खुल्दैन, यो पढ्न रहन्छ जस्तो कि यो खोल्ने हो तर यसलाई खोल्दैन, किन त्यसो हुन्छ?
राउल तापियालाई जवाफ दिनुहोस्
रोमन बोरलाडो भाज्कीज भन्यो
मेरो compis ... समाधान जस्तै उही त्रुटि?
रोमन बोरलाडो भाज्क्जलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग एप्पल टिभीको संस्करण १०.१ छ, म अनुप्रयोग स्थापना गर्न प्रबन्ध गर्छु, तर जब मँ रोम राख्छु यसले यसले वा केही बिगार्छ र खेलले काम गर्दैन र अनौठो फाइलहरू सिर्जना गर्दछ। तपाईंलाई थाहा छ यो किन हुन सक्छ र यसको समाधान के छ। मलाई भिडियो र डिजाइनको बारेमा थाहा छ जुन मेरो पेशा हो, यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने हामी बाटर गर्न सक्दछौं र म तपाईंलाई मेरो पेशेवर क्षेत्रबाट चाहिने कुनै पनि कुरामा मद्दत गर्दछु।
एप्पल टिभी control लाई नियन्त्रण गर्न कसरी पुरानो रिमोटको प्रयोग गर्ने